ပထမဆုံးဒိတ်လုပ်တဲ့အခါ မင်းသမီးလေးလိုလှနေစေဖို့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ? | Buzzy
ပထမဆုံးဒိတ်လုပ်တဲ့အခါ မင်းသမီးလေးလိုလှနေစေဖို့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ?
ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ မျက်စိထဲမှာ ဘယ်မိန်းကလေးမဆိုအလှဆုံးဖြစ်ချင်ကြမှာပါ။ပထဆုံးတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာကိုယ်က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေပေမဲ့ သူ့ဘက်ကအမြင်မှာ အလေးအနက်မထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်သူနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်းထားပြီဆိုရင် မင်းသမီးတစ်ယောက်လိုလှပနေစေဖို့ ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့…
အကျီအ၀တ်အစားတွေသစ်လွင်နေပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ချွေးနံ့တွေထွက်နေရင်မကောင်းဘူးနော်။ရေမချိုးခင်နာရီဝက်လောက်မှာ သံလွင်ဆီဖြစ်စေ၊အုန်းဆီဖြစ်စေအသားအရည်ချောမွတ်အောင်လိမ်းပေးပါ။ သံလွင်ဆီကအသားအရည်မွဲခြောက်တာကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ရေချိုးသန့်စင်ပြီးတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့moisturizer လေးလိမ်းပေးပါ။အသားအရည်ကို စိုပြည်တောက်ပေစေပါတယ်။
မြင်တွေ့နေကျပုံစံမဟုတ်ပဲ ဆံပင်စတိုင်လ်အသစ်ပြောင်းလဲပါ။ အရင်နဲ့မတူတဲ့ဆန်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်းကြောင့်သင့်ချစ်သူရဲ့မျက်စိထဲမှာ သင်ကအမြင်တစ်မျိုးနဲ့လှပနေပါလိမ့်မယ်။မိတ်ကပ်ကိုတော့ပါးပါးလေးပဲလိမ်းခြယ်ပေးပါ။
အများအားဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေကလက်သည်းရှည်ရင်မကြိုက်ကြပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့လက်သည်းတွေကိုတိုတိုနဲ့ခပ်ရှင်းရှင်းပဲထားပါ။ လက်သည်းနီလည်းမဆိုးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
ရေမွှေးဆွတ်တဲ့အခါမှာ မသိမသာလေးနဲ့မွှေးပျံ့နေစေဖို့အဓိက ဆွတ်ပေးရမယ့်နေရာတွေရှိပါတယ်။လည်ပင်းအနောက်၊ လက်ဖမိုးနားစသဖြင့်ကြာကြာခံစေမယ့်နေရာတွေကိုဆွတ်ပါ။ရေမွှေးဆွတ်ပြီးရင် လက်နဲ့မပွတ်မိစေဖို့သတိထားပါ။
အ၀တ်အစားကတော့မိန်းကလေးတိုင်းအပြင်သွားပြီဆို ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပါ။ဘာဝတ်ရမှန်းမသိအမြဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဓိကရိုးရိုးလေးနဲ့ကြည်ကေ့ာင်းစေမယ့်အ၀တ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။ အရောင်တွေရှုပ်ယှက်ခတ်မနေပဲနဲ့ လိုက်ဖက်အောင်ရွေးချယ်ပါ။ ဒူးအတိဂါဝန်လေးတွေဖြစ်စေ၊စကတ်နဲ့ရှပ်အကျီလေးတွေဖြစ်စေ ၀တ်ဆင်ပါ။ဖရီးစတိုင်လ်ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင်နောက်နေ့တွေမှဝတ်ပါ။ပထမဆုံးအမြင်ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။